Archive du 20170106
Fifidianana Filohampirenena Misoko miadana ny � ni�ni �
Manomboka manao serasera sy fanehoan-kevitra amin�ny endriny maro samihafa nanomboka tamin�ny fiandohan�ity taona ity ilay firehana efa nambara teto fa :
Lanonana eny Iavoloha Ho avy indray ny fampanantenana poakaty
Matoam-baovao indray anio ny lanonam-panjakana fifampiarahabana ny taona vaovao 2017 eo amin�ireo andrim-panjakana Malagasy miaraka amin�ireo solontena masoivohon�ireo firenena vahny sy fikambanana iraisampirenena miasa sy monina eto Madagasikara.
Jean Gabriel Harison Nesorina fa mahery fihetsika loatra ?
Na dia tsy mbola nisy aza ny fampitam-baovao ofisialy dia fantatra fa efa tena nangoron�entana ary tsy mpiasa ao amin�ny kaominina Antananarivo renivohitra intsony Atoa Jean Gabriel Harison lefitra voalohan�ny ben�ny tanana.Fantatra ny mponin� Antananarivo tamin�ny resaka fandaminana ny tsena sy ny mpivarotra amoron-dalana izy
Ben�ny tan�na 5 avy any Mampikony Nitaraina teny amin�ny filohan�ny Antenimierandoholona
Ankoatry ny asa fanaovan-dal�na dia andraikitry ny Antenimierandoholona koa ny fiahiana sy ny fisoloana tena ireo Vondrom-bahoakam-paritra manerana ny Nosy .
Pety Rakotoniaina Lany andro ny Lal�mpanorenana Malagasy
Nohitrikitrihan'Atoa Pety Rakotoniaina filohan'ny antoko politika Tambatra, izay mandalo eto an-drenivohitra amin'izao fiandohan'ny taona 2017 izao fa tena lany andro ny lal�mpanorenana Malagasy misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ka tsy ahafahana mampandroso velively ny firenena Malagasy.
Kaominina Talatamaty Efa mazoto mandoa hetra ny mponina
Tsy toy ny teo aloha intsony fa efa tena mazoto mandoa hetra ireo mponina ao amin�ny kaominina Talamaty raha araka ny fanazavan�ny Ben�ny tan�na Rado Razafindratsimba.
Ataovy lalao madio e !
Salama tsara ve ry Jean a ! Tonga soa aloha ny andro malaza anio dia arahabaina e ! Tehaka miorefodrefotra aloha ry Jean tamin�ny tsy nanavahana ireo rehetra tokony hasaina indrindra fa ireo zoky raimandreny efa nitantana ny firenena a! Fa ny loza anie ry Jean dia ity e!
Kaominina Antananarivo renivohitra Raikitra ny asa fanadiovan-tan�na faobe
Raikitra ny asa fanadiovan-tanana faobe ho an�ny kaominina Antananarivo renivohitra. Hifanome tanana aminy mandritra izany ny Boriborintany I, asa hotontosaina ny Alatsinainy ho avy izao.
Isotry sy Ampefiloha Tratra i Dore mpanendaka ikoizana
Tratra ihany i Dore, lehilahy 26 taona mpanendaka sy mpanao sinto-mahery efa za-draharaha eny amin�iny faritra Isotry sy Ampefiloha iny rehefa nikelezan�ireo polisy avy ao amin�ny poste de police Ampefiloha aina .
Fitaterana eto an-drenivohitra Napetrapetraky ny fanjakana ny UCTU
Vaky barara ny filohan�ny vondron�ny mpitatitra eto an-drenivohitra Andriambinintsolomora Bernardin omaly fa napetrapetraky ny fitondram-panjakana izy ireo tamin�ilay fanampiana nampanantenaina azy mintentina 12 miliara ariary, antony tsy nampiakaran�izy ireo ny saran-dal�na ho 500 Ar nanomboka ny 04 Oktobra lasa teo.
Ataovy lalao madio amin�izay !
Atomotra ny fotoana hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena na dia efa re aza fa misy ny kajikajy hanemorana izany. Samy manana ny fomba fiadiny sy ny hofiatrehany izany ny mpifaninana tsirairay avy.